” JOOX 2020 Popular Song Award မှာချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့အတူ သီဆိုခဲ့တဲ့ အငွေ့အသက်များသီချင်းက တစ်နှစ်တာအတွင်းရေပန်းအစားဆုံးဆုရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ Ah Boy” - Myannewsmedia
ပရိသတျကွီးရေ အဆိုတျောAh Boyကတော့ လကျရှိမှာ ခဈြစရာကောငျးတဲ့သမီး ၃ယောကျကိုပိုငျဆိုငျထားသူပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဇနီးဖွဈသူမွတျရတနာကြျောကလညျး ပထမဇနီးနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သမီးလေးနှဈယောကျအပျေါ အမရေငျးသဖှယျဂရုစိုကျမှုကွောငျ့သူတို့မိသားစုလေးကတော့အမွဲပြျောရှငျကာ စိတျခမျြးသာစရာကောငျးနတောပဲဖွဈပါတယျ။
မကွာသေးမီကလညျး အဆိုတျောခမျြးမွမေ့ောငျခြိုနဲ့အတူ AhBoyကတော့ သီခငျြးလေးတဈပုဒျကို ဖနျတီးကာ ပရိသတျတှကေိုခပြွခဲ့တာဖွဈပါတယျ။Ah Boyနဲ့ မွတျရတနာကြျောကတော့အိမျထောငျသကျ (၂)နှဈကြျော ရှိခဲ့ပမေယျ့ အခဈြတှကေတော့ အခုခြိနျထိ လတျဆတျနဆေဲဖွဈပွီးနှဈယောကျအတူတူ ” Our Travel Diaries ” ဆိုတဲ့ Page လေးနဲ့ Vlog လေးတှေ ပွုလုပျလကျြရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။
လကျရှိမှာလညျး ”သီခငျြးတှနေဲ့ နှဈတှအေကွာကွီးဝေးကှာခဲ့ပမေယျ့ ပထမဆုံးပွနျဆိုဖွဈခဲ့တဲ့ အငှအေ့သကျမြားသီခငျြးလေးကခုတော့ ကြှနျတေျာ့ဘဝအတှကျနောကျထပျမှတျတိုငျတဈခုဖွဈခဲ့ရပါပွီ။ JOOX 2020 Popular Song Award မှာ ကြှနျတျောနဲ့ ခမျြးမွမေ့ောငျခြိုတို့ရဲ့သီခငျြးလေးက ဆုရရှိသှားတဲ့အတှကျ အတိုငျးမသိဝမျးသာကနြေပျပီတိဖွဈရပါတယျခငျဗြာ။
ကြှနျတျောဘဝရဲ့ပထမဆုံးရဖူးတဲ့ ပရိသတျတှကေပေးတဲ့ ဂီတနဲ့ပကျသကျတဲ့ဆုလေးဆိုလညျး မမှားပါဘူး။ ခုလိုမြိုး ဆုရရှိအောငျ အပွိုငျ vote ပေးခဲ့ကွတဲ့ ကနြေျာ့ရဲ့ Fan တဈယောကျခငျြးဆီတိုငျးရော၊ အထူးသဖွငျ့ မောငျခြိုရဲ့ Milestones မြားကို ကြေးဇူး အထူးအထူးတငျပါတယျခငျဗြာ။ ဒီသီခငျြးကို အကောငျးဆုံး ရေးသားဖနျတီးပေးခဲ့တဲ့ ကိုသားကွီး နှငျ့ Music Producer JCZ ကိုလညျး ကြေးဇူးအထူးတငျပါတယျ။
ကြှနျတျောနောကျထပျသီခငျြးတှထေပျလုပျဖို့ ခှနျအားတှအေမြားကွီးရသှားပါပွီ။ ကြှနျတေျာ့ပရိသတျတှအေတှကျ ဒီထပျပိုကောငျးတဲ့ သီခငျြးတှနေဲ့၂၀၂၁ မှာတငျဆကျပေးသှားနိုငျအောငျကွိုးစားသှားပါမယျဗြာ။ Love you all!!!”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ၂၀၂၁ အစဟာအဓိပ်ပါယျရှိသှားပွီဖွဈကွောငျးပွောပွခဲ့တာပါ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျကွီးအားလုံး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
ပရိသတ်ကြီးရေ အဆိုတော်Ah Boyကတော့ လက်ရှိမှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့သမီး ၃ယောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇနီးဖြစ်သူမြတ်ရတနာကျော်ကလည်း ပထမဇနီးနဲ့ရရှိခဲ့တဲ့သမီးလေးနှစ်ယောက်အပေါ် အမေရင်းသဖွယ်ဂရုစိုက်မှုကြောင့်သူတို့မိသားစုလေးကတော့အမြဲပျော်ရွှင်ကာ စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မကြာသေးမီကလည်း အဆိုတော်ချမ်းမြေ့မောင်ချိုနဲ့အတူ AhBoyကတော့ သီချင်းလေးတစ်ပုဒ်ကို ဖန်တီးကာ ပရိသတ်တွေကိုချပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။Ah Boyနဲ့ မြတ်ရတနာ​ကျော်ကတော့အိမ်ထောင်သက် (၂)နှစ်ကျော် ရှိခဲ့ပေမယ့် အချစ်တွေကတော့ အခုချိန်ထိ လတ်ဆတ်နေဆဲဖြစ်ပြီးနှစ်ယောက်အတူတူ ” Our Travel Diaries ” ဆိုတဲ့ Page လေးနဲ့ Vlog လေးတွေ ပြုလုပ်လျက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိမှာလည်း ”သီချင်းတွေနဲ့ နှစ်တွေအကြာကြီးဝေးကွာခဲ့ပေမယ့် ပထမဆုံးပြန်ဆိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ အငွေ့အသက်များသီချင်းလေးကခုတော့ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက်နောက်ထပ်မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါပြီ။ JOOX 2020 Popular Song Award မှာ ကျွန်တော်နဲ့ ချမ်းမြေ့မောင်ချိုတို့ရဲ့သီချင်းလေးက ဆုရရှိသွားတဲ့အတွက် အတိုင်းမသိဝမ်းသာကျေနပ်ပီတိဖြစ်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော်ဘဝရဲ့ပထမဆုံးရဖူးတဲ့ ပရိသတ်တွေကပေးတဲ့ ဂီတနဲ့ပက်သက်တဲ့ဆုလေးဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ ခုလိုမျိုး ဆုရရှိအောင် အပြိုင် vote ပေးခဲ့ကြတဲ့ ကျနော့်ရဲ့ Fan တစ်ယောက်ချင်းဆီတိုင်းရော၊ အထူးသဖြင့် မောင်ချိုရဲ့ Milestones များကို ကျေးဇူး အထူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဒီသီချင်းကို အကောင်းဆုံး ရေးသားဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့ ကိုသားကြီး နှင့် Music Producer JCZ ကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်နောက်ထပ်သီချင်းတွေထပ်လုပ်ဖို့ ခွန်အားတွေအများကြီးရသွားပါပြီ။ ကျွန်တော့်ပရိသတ်တွေအတွက် ဒီထပ်ပိုကောင်းတဲ့ သီချင်းတွေနဲ့၂၀၂၁ မှာတင်ဆက်ပေးသွားနိုင်အောင်ကြိုးစားသွားပါမယ်ဗျာ။ Love you all!!!”ဆိုတဲ့စာလေးနဲ့အတူ ၂၀၂၁ အစဟာအဓိပ္ပါယ်ရှိသွားပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ​ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Previous post ကျရာဇာတ်ရုပ် အတွက် အရှက်ကိုဘေး ချိတ်ပြီး အကောင်းဆုံးကြိုးစား ခဲ့ကြောင်းကို ရိုက်ကွင်းနောက်ကွယ် ကအမှတ်တရတွေနဲ့ ပြသလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
Next post မိနစ်ပိုင်းစာ ဇာတ်ဝင်ခန်းတစ်ခန်း အတွက် တစ်နှစ်ကျော်လောက် ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ အရာ တစ်ခုကို စွန့်လွှတ်ရမယ့်အကြောင်းပြောလာတဲ့ မအေးသောင်း